Maxaa ku hoos qarsoona kulanka dhexmaray Wasiirka Arimaha Gudaha XFS & Gudoomiyaha G/Banaadir? – Hornafrik Media Network
Maxaa ku hoos qarsoona kulanka dhexmaray Wasiirka Arimaha Gudaha XFS & Gudoomiyaha G/Banaadir?
By HornAfrik	 On Aug 26, 2018
Waxaa kulan saacado qaatay magaalada Muqdisho ku yeeshay Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Federaalka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye iyo Duqa Muqdisho ahna Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Cabdirixmaan Cumar Cusmaan (Eng.Yarisow).
Kulanka ayaa ka dhacay xafiiska Guddoomiyaha waxaana looga wadahadlay arrimo dhowr ah oo ku saabsan wada shaqeynta, iyadoo Yariisow uu waxqabadkiisa uga warbixiyay Wasiirka.
Yariisow waxa uu si gaara uga warbixiyay Waxqabadka maamulka Gobolka ee lixdii bilood ee la soo dhaafay, waxaana sidoo kale laga wadahadlay arrimo kale oo ku saleysan xilal uu magacaabay Guddoomiyaha Gobolka.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa sheegay in ay dar-dar gelinayeen dadaallada horumarinta adeegyada muhiimka u ah dawlad wanaagga, iyadoo la isku soo dhaweeyey maamulka iyo bulshada.
Nuqul kamid ah hadalkiisa ayaa ahaa “Wasiirka Arrimaha Gudaha waxaan warbixin ka siinay waxyaabaha maamulka Gobolka Banaadir u qabsoomay Lixdii bilood ee ugu danbeeyey, gaar ahaan, ammaanka, arrimaha bulshada, dhismaha Golleyaasha deegaanka, maamul wanaagga, koboca dhaqaalaha iyo siyaasadda, Arrimaha Barakacayaasha oo mudnaan siinay iyo shaqo abuurka dhalinyarada”.
Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Federaalka Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye ayaa dhankiisa boggaadiyey waxqabadka muuqda ee maamulka Gobolka Banaadir la yimid mudadii koobneyd ee uu jiray, waxuna tilmaamay muhiimadda ay bulshada u leedahay in maamulka loo dhaweeyo.
Warar madaxbanaan ayaa sheegaya in Wasiirka Arrimaha Gudaha uu Eng. Yariisow kala hadlay arrimo la xiriira isbedel kusoo fool leh maamulka, waxa uuna sidoo kale kala hadlay isbedelkaasi iyo saameynta uu ku yeelan karo Gobolka.
Sidoo kale, warar soo baxaaya ayaa sheegaya in Guddoomiyaha Gobolka uu wajahaayo xil ka qaadis lagu sameyn doono, halka warar kaa ka duwan ay sheegayaan in lagu cadaadinaayo is casilaad, maadaama ay kororta xil ka qaadista ay sameyneyso dowlada.
Lama oga waxyaaha hoose oo ay kawada hadleen labada mas’uul oo markii danbe yeeshay kulan gaar ah oo albaabada uu u xirnaa, waxaana jira warar muujinaaya in Wasiirka Arimaha Gudaha la faray in Guddoomiyaha uu ku qanciyo is casilaada maadaama ay isku dhowyihiin.
Kismaayo-Markab dhuxul lagu rarayo oo la isku heysto.
Gaari sida Waxyaabaha Qarxa oo lagu qabtay Muqdisho & Goob muhiim ah oo la dhigay